ubuntu – Page2– Ubuntu MM
10/03/2018 10/03/2018 waiyanwinhtain
April လလယ်လောက်မှာထွက်ရှိမဲ့ Ubuntu 18.04 LTS ကို တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Default ပါဝင်လာတဲ့ အသစ်စက်စက် APP လေးတစ်ခုကိုမြင်ရမှာပါ။ ဒီ App လေးကိုတော့ GNOME To-Do လို့ခော်ပြီး GNOME Desktop ပေါ်မှာ မိမိရဲ့ Personal to-do list လေးတွေကို note လုပ်ထားပေးမှာပါ။ Feature တွေလည်းစုံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ To-Do tasks တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ organize လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ drag and drop ပုံစံမျိုးဆိုတော့ သုံးရတာတော့ အတော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ရပုံပါ။ ဒီ To-Do App ကို 18.04 ကနေစပြီးတော့ နောက်အသစ်ထွက်ရှိမဲ့ Ubuntu နဲ့ Gnome Desktop တွေမှာ Default အနေနဲ့တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ရဲ့ task တွေကို priority ခွဲ့ပြီး list […]
Tagged gnome, Software, ubuntu	Discover
ဘာစီလိုနာမြို့မှ Microsoft ကို kicks out လုပ်!!!
Barcelona kicks out Microsoft !!!! ဘာစီလိုနာမြို့မှ administration ဌာနများသည် ယခင် Microsoft အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် ရှိပြီးသား system များကို linux နှင့် open source software ဘက်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က ထုတ်ဝေခဲ့သော El País ဆိုတဲ့ Spanish newspaper တွင် ဘာစီလိုနာမြို့သည် ၎င်းတို့ computer system များကို Open Source Platform ဘက်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာအရဆိုရင် ပထမဦးဆုံး သူတို့ရဲ့ user application တွေကို open source applications တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ Microsoft Windows မှာသုံးနေတဲ့ software အချို့ကို Linux Distribution ဘက်က […]
Tagged Linux, OSS, ubuntu	Discover
02/03/2018 02/03/2018 waiyanwinhtain
Stacer (သို့မဟုတ်) Ubuntu မှာ System Optimization အတွက်အသုံးသင်တဲ့ GUI tool တစ်ခု Stacer ဆိုတာကတော့ Ubuntu အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Open source software တစ်ခုဖြစ်ပာတယ်။ Stacer နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ System ကသုံးနေတဲ့ resources တွေကိုကြည့်ခြင်း၊ အသုံးပြုထားတဲ့ Applications တွေရဲ့ cache တွေကိုရှင်းနိုင်ခြင်း၊ မလိုအပ်တဲ့ Application တွေကို uninstall လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Background မှာ run နေတဲ့ process တွေကို start/stop လုပ်နိုင်ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ အသုံးပြုနည်းကလည်း Gui နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကြီးတော့မခက်ခဲပါဘူး။ 1.The Dashboard Application ကိုစစဖွင့်လိုက်ရင် မြင်ရမှာကတော့ Dashboard ဆိုတဲ့ tab ပါ။ ဒီ tab မှာဆိုရင်တော့ System Resource တွေကို […]
Tagged Application and Softwares, gnome, ubuntu	Discover
02/03/2018 12/03/2018 pixie
Linux 4.15 အတွက် VirtualBox 5.2.8 ထွက်ရှိ
Linux 4.15 အတွက် VirtualBox 5.2.8 ထွက်ရှိ နောက်ဆုံး Linux kernel 4.15 ကို supportပေးတဲ့ VirtualBox 5.2.8 ဟာ Linux guest machines တွေမှာ နောက်ဆုံး Bionic Beaver daily builds တွေကိုစမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေပါတယ်. Linux hosts တွေအတွက်ကတော့ VirtualBox guest addition ကို integrate ထပ်လုပ်မှပဲ ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ. Virtualbox 5.2.8 changelog ထဲမှာပါတဲ့ အပြောင်းအလဲနည်းနည်းနဲ့ တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကတော့ အောက်မှာပါတဲ့ အတိုင်းပါပဲ. Support for FSGSBASE, PCID, INVPCID CPU features for guests Improved […]
Tagged Linux, ubuntu, Virtualbox	Discover
Ubuntu မှ သင့် system နဲ့ပါတ်သတ်သည့် data တွေကို collect လုပ်တော့မည် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လပိုင်း၊ ၁၄ ရက်နေ့က ubuntu က သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိရင် system data တွေကို collect လုပ်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ April လမှာထွက်ရှိလာမဲ့ 18.04 update မှာ data collection tools တွေကိုထည့်သွင်းထားမယ်လို့စီစဉ်ထားကြောင်းကိုလည်းပြောထားပါတယ်။ ဒီ feature က system hardware နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ data တွေကို Canonical ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလို data တွေကို collect လုပ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ Users တွေက ubuntu ကို ဘယ်hardware တွေပေါ်မှာ၊ ubuntu os ပေါ်မှာ […]
Tagged Security, ubuntu	Discover
02/03/2018 02/03/2018 pixie
Ubuntu 16.04 LTS အတွက် Unity 7.4.5 ထွက်ရှိ
Ubuntu 16.04 LTS အတွက် Unity 7.4.5 ထွက်ရှိ Unity 7.4.5 Update 7.4.5 update က features အသစ်တွေနဲ့ရင်ခုန်စရာကြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် bug fixes တွေ all-round improvements တွေကတော့ကျေနပ်စရာကောင်းလှပါတယ်. အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင်တော့ General bug and performance fixes HIDPI fixes A lock screen security fix Improved low graphics mode Unity က Low Graphics Mode အသစ် Unity မှာ low graphics mode ပါလာခဲ့တာ အရင်နှစ်တွေတည်းကပါ. […]
Tagged ubuntu, unity	Discover
Ubuntu Gnome Desktop မှာ application launcher တွေကို categories ခွဲပြီးသိမ်းပေးမဲ့ script Ubuntu Gnome Desktop မှာ application menu ဖွင့်ရင် applications တွေက alphabetical လိုက် စီထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ app နည်းနည်းပဲရှိရင်မသိသာပေမဲ့ app တွေများလာတဲ့အခါ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ app ကိုလိုက်ရှာနေရတာနဲ့တင် တော်တော်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ app တွေကို သူတို့ရဲ့ functions ပေါ်မူတည်ပြီး categories လေးတွေခွဲထားရင် ရှာရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် web-browsers တွေ၊ mail client တွေ နဲ့ torrent downloader တွေကို Internet ဆိုတဲ့ categories အောက်၊ Librea Office […]
Tagged fix, gnome, ubuntu	Discover
Application & Softwares Guide
Steam and Dota2 on ubuntu Gamer တော်တော်များများကတော့ steam နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ windows သုံးနေရာကနေ ubuntu ကိုပြောင်းသုံးမယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ “ငါဆော့နေတဲ့ dota2 က ubuntu မှာရော ဆော့လို့ရပါ့မလား” ဆိုတာကိုစိုးရိမ်ပြီး ubuntu ကိုမသုံးဖြစ်တော့တာမျိုး တွေလည်းရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ အဲ့တော့ ubuntu မှာ steam install လုပ်ပြီး Dota2 ကစားဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ??? Install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ Ubuntu repository ကနေ install လုပ်နည်း $ sudo add-apt-repository multiverse $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install steam […]
Tagged Dota, Dota2, Steam, SteamOS, ubuntu	Discover
Application & Softwares (27)
Application and Softwares bootcamp bug burmese core-member Debian download DVD Edubuntu feature File System foss FSF gnome guide IoT ISO Kubuntu Linux Linux Admin LoCo LPI Lubuntu member myanmar news OpenSUSE OSS Pi RaspberryPi Release Root Security SELinux Server Software SteamOS SysAdmin ubuntu ubuntu-mm ubuntumm UGJ wiki Windows Xubuntu